Nagarik News - मासु र मिलन
24 Jestha, 2077 | June 06, 2020
मासु र मिलन
२६ असोज, २०७०
नेपालीहरूको ठूलो चाड दसैँ आयो। गरिबगुरुवादेखि सम्भ्रान्तसम्मले दसैँलाई खानपिन, मनोरञ्जन र भेटघाटले रमाइलो बनाउने गरेका छन्। खर्च गच्छेअनुसार गरिएलान्। हरेक सालझैँ यसपालिको दसैँ पनि महँगो भएको छ। रेमिट्यान्सका कारण दूरदराजका गाउँलेका हातमा पनि दुईचार पैसा पर्न थालेका छन्। नेपालीहरूको खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मिठो भनेकै मासु ठान्ने नेपालीको खाद्य संस्कृति छ। दसैँ त यसै पनि मासु पर्व! आफन्तसँग मिलन र पुनर्मिलन दसैँको अर्काे सुखद पक्ष हो। यसपालि दसैँ कसरी मनाउँदै छन् तन्नेरीहरू? सजना बरालले उनीहरूको 'फेस्टिभल मुड' छाम्ने कोसिस गरेकी छिन्।
नयाँ लुगा किन्ने, मामा घर जाने, टीका लाउने, आशीर्वाद थाप्ने, दक्षिणा बटुल्ने, मासु–भात खाने, पिङ खेल्ने।
दसैँमा सबैले गर्दै आएका काम यिनै हुन्। हरेक साल उही 'सेलब्रेसन' शैली! 'केही नयाँ–नौलो, उपयोगी र रमाइलो कामकुरो गर्न पाए पो दसैँ दसैँ जस्तै हुन्छ,' भृकुटीमण्डपमा भेटिएको अम्बिका पोखरेल भन्दै थिइन्, 'म त परम्परागत ढंगले दसैँ मनाउने मुडमा छैन। म त घुम्न जाने विचारमा छु।' दसैँ बिदालाई पढ्ने, घुम्ने, फिल्म हेर्ने, बाइक/स्कुटर हाँक्न सिक्ने काममा सदुपयोग गर्ने नयाँ चलन सुरु भएको छ। 'तर, मासु चाहिँ टन्न खाइन्छ,' कपन, काठमाडौँकी १८ वर्षीया अम्बिकाले भनिन्, 'दसैँ भनेकै मासु हो।'
कीर्तिपुरमा बस्ने पोखराका शान्त क्षत्री पनि दसैँलाई मासुकै पर्व मान्छन्। एमएका विद्यार्थी उनी शाकाहारीले कसरी दसैँ मनाउँदा होलान्, छक्क पर्छन्। 'शाकाहारीले त दसैँ नमाने पनि हुन्छ,' मासुप्रेमी शान्तले भने, 'आफू त मासु भनेपछि जहिले पनि हुरुक्कै। झन् दसैँमा त बिहानै मासु, बेलकै मासु खाइन्छ। बाउले खसी पनि ठीक पारिसके। हाम्रो परिवारलाई त दुइटा खसी चाहिन्छ, दसैँका लागि।'
'म शुक्रवार पोेखरा जाँदै छु,' स्वयम्भूकी तृष्णा दवाडीले योजना सुनाइन्, 'लुगा किन्ने र दक्षिणाबापत मलाई दिने पैसा पहिले नै मागिसकेँ बाबासँग। त्यही पैसाले पोखरा घुम्ने प्लान छ। प्याराग्लाइडिङ गरेर फर्किन्छु।' उनले साथीभाइसँग मिलेर यस्तो योजना बनाएकी हुन्। टीकाको पर्सिपल्टमात्रै काठमाडौँ फर्किने तृष्णाले यसपालिको दसैँ अविस्मरणीय हुने अनुमान गरेकी छन्। 'पोहोरतिर जहिल्यै घरमै बसिन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'टीकाको दिन कुर्दा–कुर्दा दिक्कै लाग्थ्यो। एकछिन ह्वार्र टीका लगायो। त्यसपछि सकियो दसैँ। रमाइलै हुन्थेन।' पोखरा भ्रमणले दसैँमा रौनक थप्ने उनको विश्वास छ। मनमैजु, बालाजुकी २० वर्षीया सम्झना आचार्य पनि यसपालिको दसैँमा घरमा हुँदिनन् रे। उनी काभ्रेस्थित साथीको घर जाँदै छिन्। भनिन्, 'आजै (सोमवार) हिँड्न लाग्या। उतै टीका लगाउँछु। आफ्नो घरमा त जन्मेदेखि नै टीका लगा'को हो। यसपालि साथीको घरमा दसैँको एक्स्पिरियन्स गर्नेछु।'
हप्ता–दश दिन लामो बिदा यत्तिकै खेर फालिने भएकाले युवायुवतीले केही नयाँ अनुभव बटुल्न चाहेको बताए। दिनभरि हाई काढ्दै घरमा बस्नुभन्दा कतै घुम्न गए रमाइलो र रिफ्रेस भइने मोर्गन कलेजकी सञ्जु मगरको भनाइ छ। 'वर्षैभरि काम गरिन्छ, कलेज गइन्छ,' उनले भनिन्, 'घुमघाम गर्ने बेला भनेकै दसैँताका हो।' तर, उनले लक्ष्य गरेको घुमाइ ठाउँ विशेषमा भने होइन। दसैँ सांस्कृतिक पर्व भएकाले देशका विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले महŒवपूर्ण स्थानको भ्रमण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'गोरखा दरबार, मनकामना, मुक्तिनाथतिर जाँदा हुन्छ,' उनले सुझाइन्, 'घरमा जमरा राखेर घुम्न निस्किने र टीकाको अघिल्लो दिन फर्किने। जमरा पनि उमि्रसक्छ, घुमेर पनि आइन्छ। दसैँ सेलब्रेसन र घुमघाम दुवै हुन्छ।'
दसैँका बेला आफ्नो ज्ञानभण्डार बढाउन चाहने युवायुवती पनि कम छैनन्। सामाखुसीकी २२ वर्षीया कल्पना तामाङ यसपालि दसैँभरि किताब पढ्ने सुरमा छिन्। 'दुई दिनमा एउटा नोभल सिध्याउँछु,' उनको लक्ष्य छ, 'बाह्र वटा किताब किनेकी छु। एक हप्तामा सबै पढेर सकाउनेछु।' उनले नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी आख्यान पढ्ने बताइन्। मनमोहन स्मृति कलेजका कमल पन्थीको ध्यान पनि पढाइतिरै छ। 'मंसिरमा आइएलटिएस टेस्ट दिँदै छु,' उनले भने, 'त्यसको लागि तयारी गर्नुछ। दसैँभरि अंग्रेजी भाषाका किताब पढ्छु। अंग्रेजी पत्रिका किन्छु। जे पनि अंग्रेजीमै गर्छु यसपालि।' लमजुङकी देविका थापाले चाहिँ यो बिदामा थेसिस सकाइछाड्ने अठोट गरेकी छन्। 'अरू बेला अफिस जानुपर्छ,' नवजीवन स्कुलकी शिक्षिका उनले भनिन्, 'थेसिसलाई टाइम दिन पाइँदैन। यो बिदामा ढुक्कले लेखपढ गर्ने हो।'
कल्पनाले एक दर्जन किताब किनेझैँ उनकी बहिनी चिनोले भने दुई दर्जन फिल्मका सिडी भेला पारेकी छन्। हिन्दी, कोरियन, थाई र अंग्रेजी फिल्मको राम्रो कलेक्सन छ उनीसँग। 'बिदामा पनि कोही पढ्छ?' उनले दिदीलाई व्यंग्य गरिन्, 'पढेर को ठूलो भ'को छ। आफू त दिनभरि फिल्म हेरिन्छ।' लाजिम्पाटका पुष्कर सिंह पनि फिल्म हेर्ने ध्याउन्नमा छन्। 'इंग्लिस फिल्म घरमै हेर्छु। हिन्दी चाहिँ हलमै गएर हेर्न मन थियो। तर, दसैँ सुरु भएपछि हल पो खुल्छ, खुल्दैन कुन्नि?' उनले भने।
केही सिक्ने र सिकाउने वा नयाँ अनुभव हासिल गर्ने अवसर पनि बन्न थालेको छ यो पर्व। बसुन्धराका २० वर्षीय विनय श्रेष्ठ तिहारपछि बाइक किन्ने सोचमा छन्। तर, बाइक किनेर मात्रै भएन। चलाउन जान्नुपर्‍यो। 'चलाउन त साइकलसमेत आउँदैन,' पूर्णिमा फाइनान्समा काम गर्ने उनले भने, 'काठमाडौँको सडकमा कसरी बाइक कुदाउने होला? सम्भि्कँदै आङ सिरिङ्ङ हुन्छ। तर, दसैँभरिमा जसरी भए पनि बाइक चलाउन सिकेरै छाड्छु।' मामासँग सिकिमाग्ने उनको विचार छ। यो बेला रोड खाली हुने भएकाले मौकाको फाइदा उठाइहाल्ने पक्षमा छन् उनी।
नयाँ बसपार्ककी कविता गुरुङ र बालाजुका मोहन भण्डारीका सीप सिक्ने योजना छन्। कविता यसपालि फुपूसँग मासुका अनेक परिकार बनाउन सिक्दै छिन्। मोहन भने आफ्ना ग्राफिक डिजाइनर दाइसँग डिजाइनिङका टिप्स लिँदै छन्। 'अरू बेला दाइ व्यस्त हुन्छ,' मोहनले भने, 'ऊ फुर्सदमा भएको बेला डिजाइनिङ सिकिहाल्ने दाउ छ मेरो।'
दसैँ र मासु एकअर्काका पर्यायसरह छन्। दसैँ भनेकै मासु बुझ्ने चलन छ नेपालमा। टिनएजरको स्वादे जिब्रो त झन् मासु भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ। 'हाम्रोतिर च्यांग्रा काटिन्छ,' सोलुखुम्बु स्थायी घर भएकी सोनम शेर्पाले भनिन्, 'च्यांग्राको मासुलाई झिरमा उनेर अगेनोमाथि सेकाएर सुकुटी बनाउने प्लान छ मेरो। दसैँपछि काठमाडौँ आउँदा लिएर आउँछु।' लमजुङकी मनीषा घिमिरे पनि यसपालि आमाजू दिदी, नन्द र बहिनीहरूसँग मिलेर मासु र कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी गर्ने सुरमा छिन्। 'केटाहरू मात्रै मस्ती गर्छन्,' उनले भनिन्, 'यसपालि हामी आइमाई खलकले पनि रमाइलो गर्ने प्लान बनाएका छौँ।'
दसैँ भेटघाटको पर्व हो, मिलनको पर्व हो। टाढा–टाढा रहेका आफन्त र साथीभाइसँग भेट हुने हुँदा मन गद्गद् हुने सोनमले बताइन्। उनले यसपालिको दसैँ पूरै परिवारलाई समर्पित गरेकी छिन्। 'घरपरिवारसँगै रमाइलो गर्ने हो,' उनले भनिन्, 'अमेरिकाबाट दाजु–भाउजू र भदा–भदै आएका छन्। भदाभदै उतै जन्मिएका हुन्। तिनलाई नेपाली बोल्न सिकाउँछु।'
दसैँ बिदाको उपयोगिता बढेको छ। यो बेलामा जति लामो सरकारी बिदा वर्षैभरि पाइँदैन। त्यसैले पनि मानिसहरूले यसलाई आफ्ना व्यक्तिगत कामकाजमा उपयोग गर्छन्। प्रायः जागिरे युवायुवतीले दसैँ–बिदालाई घुमघाममा व्यतीत गर्ने बताए भने स्कुल र कलेज पढ्नेहरू घरपरिवारसँगै दसैँ मनाउने सोचमा छन्।
पुर्ख्याैली घर जानेको लर्को लामो छ। 'म पाँच वर्षपछि गाउँ जाँदै छु,' स्याङ्जा, गल्याङकी चाँदनी पुनले भनिन्, 'बाजे, बज्यैसँग भेट हुने भयो। खुसी लागेको छ।'
दसैँका बेला गरिने पूजापाठ, सरसफाइ, किनमेललगायत काम घरका मूलीले गर्ने गरेका छन्। ती कार्यमा छोराछोरीलाई सामेल गराउने चलन अहिले हराउँदै गएको छ। घरका लागि आवश्यक सामग्री ठूलाबडा आफैँ किन्छन्। टिनएजर छोराछोरीलाई 'आफैँ सपिङ गर' भन्दै पैसा दिने चलन सुरु भएको छ। पूजापाठ गर्ने कार्यमा बालबच्चालाई कमैले सहभागी गराउँछन्। यी कार्यको अनुभव नभएकाले अहिलेका युवायुवतीले दसैँको धार्मिक पक्षबारे त्यति जानकारी पाएका छैनन्। सोह्र श्राद्ध कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? नौरथामा के गरिन्छ? घटस्थापना भनेको के हो? फूलपातीका दिन के गर्ने? अष्टमी, नवमी र दशमीका विशेषता के हुन्? दसैँलाई किन विजया दशमी भनिएको हो? जस्ता विषयमा धेरै युवा अनभिज्ञ छन्। दसैँको रितिथितिबारे जानकार नभएकाले पनि उनीहरू यो चाडलाई आफ्नै ढं्रगले मनोरञ्जनात्मक बनाउँछन्।
'एक दिन त हुन्छ दसैँ,' ग्रिनल्यान्ड स्कुलकी आशिका खड्गीले भनिन्, 'खसी काट्ने दिनलाई के गन्नु? टीका लगाउने दिन मात्रै त दसैँ हो नि।' टीकाको अघिपछि के गरिन्छ? दसैँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? उनलाई पत्तो छैन। गजबको कुरा त के भने उनले अहिलेसम्म जमरा राखेको समेत देखेकी छैनन् रे। 'पनौतीमा बाले जमरा राख्नुहुन्छ,' उनले भनिन्, 'कसरी राख्नुुहुन्छ, थाहा छैन। हामी जाँदा पूजाकोठामा धान उमि्ररहेको हुन्छ। त्यही उखेलेर हामीलाई लगाइदिने हो।' जमरा किन लगाइन्छ? यो कुरा आशिकालाई मात्र होइन, अधिकांश युवायुवतीलाई थाहा रहेनछ। मनमैजुकी सम्झनाको बुझाइ यस्तो छ– 'दुर्गा मातालाई वनस्पति मन पर्छ रे। उनले खोइ कुन राक्षसलाई मारेपछि पृथ्वीका मान्छेले टीका र जमरा लगाउन थालेका हुन्।'
असत्यमाथि सत्यको जीत भएको खुसियालीमा दसैँ मनाउन थालिएको क्याम्पेन एकेडेमी, कक्षा ११ का सञ्जय थापा मगरले बताए। 'पौराणिक कालमा नौ वटा देवीसँग एउटा दानवको युद्ध परेको थियो रे,' उनी दसैँको किंवदन्ती आफ्नै हिसाबले सुनाउँदै थिए, 'खै, के कुरामा झगडा गरेका हुन्, त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। जे होस्, त्यो युद्धमा देवीहरूको जित भएको थियो रे। युद्ध १० दिनसम्म चलेको र त्यसमा देवीहरूको जीत भएकाले यसलाई विजया दशमी भनिएको हो।' दसैँको धार्मिक पृष्ठभूमिबारे युवाहरूले जाने–सुनेका कथा यस्तै छन्। स्कुलमा छँदा दसैँबारे रटेको एक पेजको निबन्ध कलेजसम्म पुग्दा दिमागबाट 'आउट' भइसक्ने कक्षा १२ मा अध्ययनरत भूपेन्द्र क्षत्रीले बताए। 'क, ख, ग, घ त बिर्सिसकियो,' उदहारणसहित हाजिर भए उनी, 'दसैँको धार्मिक पक्ष कसरी सम्भि्कनु?'
उर्वशी कि मेनका?
वरिष्ठ फिल्मकर्मी नीर शाहले रीमा विश्वकर्मालाई 'उर्वशी र मेनका' भनिदिए। फिल्ममा भन्दा म्युजिक भिडियोमा बढी देखिने रीमाको सौन्दर्यमाथि टिप्पणी गर्दै उनले यस्तो बताएका थिए। भारतका विभिन्न ठाउँमा छायांकन भएका भिडियो...
राष्ट्रकविज्यू! 'गौरी' लाई 'गउरि' बनाइँदै छ!
वर्ण विन्यासका सुधार वादीहरूले गुरु प्रसाद मैनालीको 'शहिद' कथालाई 'सहिद' बनाएरै छोडे। झमककुमारी घिमिरेको प्रसिद्ध कृति 'जीवन काँडा कि फूल' अशुद्ध भइसक्यो। 'जीवन काँडा कि फुल' हुनुपर्ने अरे! राष्ट्रकवि घिमिरेको...
थाहै नपाई दुइटै फेल
काठमाडौँका सडकपेटीमा लाउडस्पिकरबाट याचनाका आवाजहरू गुञ्जिरहेका हुन्छन्। मिर्गाैलाका रोगीका आफन्त कपडा ओछ्याएर मनकारी बटुवाहरूले दिएका पाँच–दश रुपैयाँका नोट बटुलिरहेका हुन्छन्। थाहै नपाई मिर्गौला फेल भएपछि रोगी र उसका आफन्तले धेरै...
एक सर्को चुरोटबाट सुरु हुन सक्छ, ड्रग्सको डरलाग्दो दलदलतिरको यात्रा। अभिभावकले छोराछोरी सातआठ कक्षामा पुग्नासाथ सजग भइहाल्नुपर्ने देखिन्छ। हजारौँ नेपाली युवाको भविष्य ड्रग्सले ध्वस्त भएको छ। विशेष बन्ने ध्याउन्न र...
के भन्या यस्तो!
कति हिरोइनलाई दोष लगाउनु? कि काम गर्दिन भन्नुपर्‍यो, कि त निर्देशकले भनेअनुसारका दृश्य दिनुपर्‍यो। कामै नगरेपछि मुखमा माड कसरी लगाउनु? कुरा फिल्म 'स्टार'को हो र फिल्ममा प्रयोग गरिएको संवादको हो।...
'मौकामा छक्का हानेको हुँ'
उदितनारायण झाको स्वरको जादुले झंकृत छ, बलिउड। बाह्र वर्षपछि उनी नेपाल आए। राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार कार्यक्रमका लागि नेपाल आएका उनले काठमाडौँको केही ठाउँ घुमे, पुराना साथीसँगी भेटेर सम्बन्धको नवीकरण गरे।...
लोग्ने र स्वास्नी, जोई र पोइ?
हाम्रो गाउँमा गोथेका लोग्नेस्वास्नी सधैँ झगडा गर्छन्। यी दुई थरीको ङयार्र र ङुर्रले छरछिमेकका मान्छेहरू वाक्क भइसके। लोग्ने भनाउदो स्वास्नीलाई शङ्का गर्छ। स्वास्नी भनाउदी लोग्नेलाई विश्वास गर्दिन। यी लोग्ने स्वास्नीको...